Shaqooyinka aanu qabano | PUNSAA
Samaynta Tubta u Qareemidda ee Dalladda Daneeyayaasha aan Dawliga ahayn
U qareemidda iyo galaangalka siyaasadeed ayaa loo tixgeliyaa inay tahay qayb muhiim u ah sidii sare loogu qaadi lahaa dajinta siyaasad wanaagsan iyo ka qayb gelinta bulshada barnaamijyada. Dawladda, maamul wanaagga iyo hubinta helidda xuquuqaha aasaasiga ah ee dadka nugulka ah. Si loo wanaajiyo siyaasadaha wadanka loona gaaro isbadallada la rajaynayo, PUNSAA waxay garwaaqstay muhiimadda horumarinta saamaynta go’aan gaarista. Hadaba si lagu xaqiijiyo dadaallada dalladda ee saamaynta siyaasadaha dawladda iyo in si wadajir ah loo abaabulo qaybaha bulshada rayidka ah sidii ay talo ugu yeelan lahaayeen hogaanka, PUNSAA waxay dajisay tubta u qareemidda ee dalladda. Laga soo bilaabo bartamihii 2012 waxaa dhacay kulamo isdaba joog ah oo ay soo abaabushay dalladu ayadoo isku keentay xubnaha guddiga agaasinka, qaybo ka mid ah golaha guud ee dalladda, xubnaha xoghaynta dalladda iyo qaybaha kala geddisan ee bulshada rayidka ah. Kulamadaas waxaa loogu Gogol xaarayay astaynta waxyaabaha mudnaanta u leh bulshaada reer Puntland oo ay haboontahay in laga qareemo, waxaa taas xigtay kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen xubno farsamo oo kasocday Saferworld si loo sameeyo qorshaha iyo tubta qareemidda ee dalladda. Kulanku wuxuu mudnaanta siiyay saddex dhibaato oo ay dalladdu diiradda kusaari doonto u qareemisteeda waxayna kala yihiin; Dhowrista deegaanka, Ilaalinta xuquuqda aadanaha, iyo Helista maamul loo dhanyahay. Intaa ka gadaal qabya qoraalka tubta iyo qorshaha u qareemidda ayaa la dejiyay waxaana laysku raacay samaynta saddex koox hawleed oo ka shaqeeyah ka mira dhalinta himilada dalladda ee saddexdaas arrimood
Awood dhisid iyo Khibrad wadaag
Waxay dalladdu siisaa tababarro awood dhisid ah xubnaheeda iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah dhinacyada saamaynta siyaasadaha, maamulidda dhaqaalaha, hogaaminta, maamul wanaagga iyo mawaadiicda kale ee muhiimka ah ama ay u baahanyihiin. Dalladdu waxay dhistay awoodda aqooneed ee koox hawleedyada ayadoo ku tababartay falanqaynta siyaasadaha iyo u qareemista, abaabulidda awoodaha iyo unkidda dhaqaalaha. Waxaa kaloo la tababaray xubnaha guddiga agaasinka iyo xubnaha xoghaynta dalladda. Dalladdu waxaa kaloo ay kaashatay hay’adda UNSOM si tababar dheeraad ah oo kusaabsan xuquuqda aadanaha loo siiyo koox hawleedka xuquuqda aadanaha ee PUNSAA iyo ururada kale ee ka shaqeeya dhawrista xuquuqda aadanaha, tababarada dalladdu abaabushay waxay isugu jiraan kuwo u qareemis, daba galka iyo qiimenynta, hanaanka diyaarinta qoraalada mashaariicda iyo warbixinnada. Shaqaalaha dalladu wuxuu safaro cilmi kororsi iyo khibrad wadaag ah ugu baxay wadamo kala duwan oo dariska ah.
Dhisidda xiriirka Dalladda ee Dawladda iyo Beesha Caalamka
PUNSAA waxay u taagantahay u fududaynta bulshada rayidka ah in ay la yeeshaan wada shaqayn dhow iyo wada xaajood siyaasadeed dawladda iyo beesha caalamka si siyaasadaha dawladda iyo qorshayaasha horumarineed ee beesha caalamkuba u noqdaan kuwo lagu saleeyay oo ka turjumaya aragtida iyo baahiyaha bulshada. Waxay dalladdu dajisay hanaan isku xir oo u ogolaanaya bulshada rayidka ah in ay ka qayb qaataan hawlaha heer tuulo, dagmo, gobol iyo iskaashiga heer caalamiba, waxayna saamayn ku yeelatay qorshayaasha horumarineed ayadoo u maraysah wada-xaajood iyo dhisidda kalsoonida. Waxayna dalladdu horumarisay xiriirka wanaagsan ee ku dhisan wada shaqaynta iyo is qadarinta hay’adaha dawliga ah ee dajiya siyaasadaha. Si kastaba ha ahaatee PUNSAA waxay u martaa dhamaan arrimahakan hanaan saaxiibtinimo iyo wada shaqayn dhaw oo ay la leedahay dawladda iyo beesha caalamka ayadoo ujeedkuna yahay in Puntland la horumariyo. Sidaa awgeed xiriirka dalladda iyo dawladdu wuxuu ahaa mid sii kordhaya oo sii wanaagsanaada marba marka xigta ilaa ay PUNSAA ku dhex yeelatay iminka xafiiska madaxweynaha u qaybsane fududeeya kulamada madaxweynaha iyo hogaamiyayaasha ururada aan dawliga ahayn.